प्रेमी प्रेमिकाले आफूलाई रोक्न नसकेपछि समुन्द्रको किनारमै भए सुरु, अन्य पर्यटकले भने के गरे यस्तो ? « Gaunbeshi
प्रेमी प्रेमिकाले आफूलाई रोक्न नसकेपछि समुन्द्रको किनारमै भए सुरु, अन्य पर्यटकले भने के गरे यस्तो ?
आफूभित्रको संवेग रोक्न नसक्दा एक जोडिले धेरै लाज लाग्ने काम गरेका छन् । यो घटना बिदेशको हो । उनीहरु सार्वजनिक स्थलमा अस्वभाविक गतिविधि गर्न थालेपछि एक जना पर्यटकले भने त्यो जोडीलाई च प्प लले धु ला ई गरेका थिए। थुप्रै पर्यटकहरु घुम्न आएको ठाउँमा त्यस्तो दृश्य देखिएपछि सबै छक्क परेका थिए । आफ्नो ब्यक्तिगत कोठामा जस्तै उनीहरु जुटेको देखेर वरपरका पर्यटकहरु रिसाए ।
कुनै एक पर्यटकले सो भिडियो खिचेका थिए । मानिसहरुको भिडमा सबैलाई वेवास्ता गर्दै त्यस्तो गर्नेलाई पर्यटकले त्यहाँ बस्न दिएनन् । द सनका अनुसार यो घटना पोल्याण्डको एक समुद्र किनारमा भएको हो । गत शुक्रबार मि ए ल्नोको समुद्र किनारमा यो जोडी आफ्नै धुनमा थिए । मानिसहरुकै भिडमा उनीहरु च र्चि क ला जारी राखे ।
भिडियोमा एक महिलाले जोडीमाथि पानी ख न्या ए को समेत देख्न सकिन्छ । त्यसपछि दुई पुरुषले ति ब्यक्तिलाई समातेर महिलाबाट अलग गराएका थिए । स्थानीय प्रहरीले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । महिला भने स म्प र्क वि हि न भएको प्रहरीले जनाएको छ ।